Kenya: Domberina An-tSerasera Noho ny Fanafihana Grenady Avy Amin’ny Al Shabaab · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2011 21:48 GMT
Nanafika ny vondrona mitam-piadiana Somali Al Shabaab ny tafika keniana vao tsy ela izay ka ny anaran'ny fanafihana dia midika hoe “Operation Linda Nchi” amin'ny teny Swahili na Operation Fiarovana ny Firenena. Nampanatena ny Al Shabaab taorian'ny fanafihana fa hanafika an'i Nairobi.
Efa nahitana fanafihana tamin'ny alalan'ny grenady indroa nahafatesana olona tao an-drenivohitr'i Kenya, Nairobi : ny iray tao amin'ny toerana fialamboly malaza ary ny hafa kosa tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana be olona tao an-tampon-tanàna.
Niteraka resabe an-tserasera izany fanafihana anankiroa izany. Vinavina Nairobiana nanolotra “Toro-hevitra Hisorohana Amin'ny Fanafihana Amin'ny Grenady”:
Gukira mampitandrina ny amin'izay mety ho fiakaran'ny toe-tsaim-pankahalana na fanavakavahana ireo Somalis teraka Kenyana:
Wamathai nandefa fihetseham-po mitovy tahaka izany:
IddSalim nanontany ny antony miafina nahatonga ny fanafihana ara-miaramila Kenyana sy ny nanaovana izany tamin'ny fotoana mety indrindra:
SKibuchi mampahatsiahy antsika ny hira malaza an'i Bruno Mars :